कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउँदा साइड इफेक्ट देखिए के गर्ने ? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७७, ६ माघ मंगलवार १२:३८ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आयात गर्ने अन्तिम तयारी छ । आगामी फागुनसम्म कोरोना विरुद्धको खोप नेपालीले लगाउन पाउने सरकारले बताउँदै आएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले इण्डीयामा उत्पादन भएको खोप आयातका लागि अनुमति समेत दिइसकेको छ ।
विश्वका कतिपय देशहरुमा खोप लगाउँदा मृत्युसमेत भएको छ । कोरोना विरुद्धको खोप आइहाले नेपालीले प्राथमिकताका आधारमा लगाउन त पाउँछन् तर, साइड इफेक्ट भए के गर्ने त ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले खोप लगाएपश्चात् साइड इफेक्ट देखिए सरकारले उपचार गरिदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-‘ खोप लगाउँदा केहि समस्या भए उपचार गर्ने हो । सरकारले खोप लगाएपश्चात् साइड इफेक्ट देखिए उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ’
कोरोना विरुद्ध बनेको खोपले साइड इफेक्ट देखा पर्नसक्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान स्थितिमा, खोप लगाउनेहरू सुरक्षित हुन्छन् भनिएको छ । तर, यसलाई लिएर औषधि कम्पनीहरू र चिकित्सकहरूले चेतावनी पनि दिइरहेका हुन्छन् ।
ज्वरोः मोर्डनाको खोप लगाएपछि स्वयम्सेवकहरुमा ज्वरो बढ्ने र अत्यधिक चिसो लाग्ने जस्ता साइड इफेक्ट देखियो । भ्याक्सिनको केही घण्टा पछि, त्यस व्यक्तिको ज्वरो १०२ डिग्री तापमानमा थियो । त्यसकारण, खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले यी दुई साइड इफेक्टमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । धेरै चोटि जब शरीरले एन्टिबडीहरू गर्छ, एक व्यक्तिलाई हल्का वा उच्च ज्वरो हुन सक्छ ।
टाउको दुख्नेः खोप लगाएपछि टाउको दुख्ने समस्या पनि एक लक्षण हो जसका लागि हामी तयार हुनुपर्दछ । खोपको प्रयोगपछि, बिरामीलाई कडा टाउको हुन सक्छ। यस बाहेक, मानसिक तनाव, चिडचिडेपन जस्ता समस्याहरूले तपाईंलाई पनि देखिनसक्छ । कुनै पनि प्रकारको संक्रमणमा ५० प्रतिशत बिरामीहरु खोप लगाएपछि यस समस्याबाट ग्रस्त हुन्छन् ।
बान्ता हुनु वा वाकवाक लाग्नुः खोपले एक व्यक्तिलाई ग्यास्ट्रोइंटसटाइनल प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्छ । एक स्वयम्सेवकले मोर्डनाको खोपको सर्वाधिक डोज लिएपछि कयौ घण्टासम्म उनको स्वाथ्यमा समस्या देखिएको थियो । यसैबिच उनलाई बान्ता हुने, वाकवाक लाग्ने छट्पटी हुने तथा पेटमा ऐठान हुनेजस्ता लक्षण देखिएको थियो ।
मांसपेशी दुखाइः जहाँ बिरामीलाई खोप लगाईन्छ, त्यहाँ प्रायः जसो मांसपेशी दुख्ने र सुन्निने समस्या हुन्छ